Indlu yangaphambili yolwandle ene-pier yabucala - I-Airbnb
Indlu yangaphambili yolwandle ene-pier yabucala
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLena
Indlu engaphambili yolwandle eyodwa ene-pier yabucala, kanye phezu kwamanzi. Imbonakalo entle yeziqithi zaseSweden. Fumana iqhekeza elikhethekileyo leelali zaseSweden ngokutshona kwelanga kunye nokuphuma kwelanga okwesibini.
1 iiyure 15 imizuzu ukusuka Stockholm, 1 iyure ukusuka Uppsala. Le ndawo iphantsi kokulungiswa kunye nekhitshi elitsha, igumbi lokuhlambela kunye nokuphuculwa ngokubanzi. Imifanekiso emitsha iya kufakwa yakuba igqityiwe.
Nceda uyiphathe ngentlonipho indlu yakho njengokuba ubuya kwenza eyakho. Libhongo novuyo lwam kwaye ndifuna ukuyigcina injalo.
Kukho izindlu ezincinci ezimbini kwipropati ecaleni kwendlu enkulu onomdla kuyo. Ngamanye amaxesha ndichitha ixesha kwenye yezindlu ezincinci, xa imozulu intle. Ijethi emifanekisweni yeyokusetyenziswa nguwe wedwa, njengoko kunjalo ngepatio enkulu eqhagamshelwe endlwini.